IPhone-yada soo socda waxay taageero u heli karaan qalinka Apple | Wararka IPhone
Qalinka Apple wuxuu guul u ahaa Apple, Dhamaanteen waan xasuusannaa ereyadii Steve Jobs ee dhaleeceeyay qalinleyda dhijitaalka ah markii la bilaabay iPhone-kii ugu horreeyay, laakiin runtu waxay tahay in iPad Pro la siiyo is-dhexgal sida qalinka Apple ay ahayd guul oo u horseeday iPad Pro inuu noqdo kiniin dijitaal ah oo loogu jecel yahay naqshadeeyayaasha badan. Apple wuu ogyahay kartida qalinka Apple, cadeynta tan waxay ahayd bilaabida jiilka labaad ee qalinka Apple, oo ah xitaa qaab sax ah oo shaqooyin cusub leh.
Waa maxay mustaqbalka? Shakhsiyan, waxaan ku dhiiran lahaa inaan dhaho taas Qalabka Apple Waxay noqon doontaa mid ka mid ah khadadka wax soo saarka Apple, oo joojinaya inay ahaato qalab loogu talagalay iPad Pro. Iyada oo ah macOS cusub ee loo yaqaan 'Catalina macruufka' ah ayaa iman doonta Mac-ga iyada oo loogu mahadcelinayo Sidecar taasi waxay noo oggolaan doontaa inaan u isticmaalno iPad-ka sidii shaashad labaad, haa, wax walbana waxay u muuqdaan inay tilmaamayaan taas IPhone-ku waxay noqon doonaan aaladaha xiga ee ku habboon ee qalinka Apple. Boodka ka dib waxaan kuu sheegeynaa dhammaanba imaatinka qalinka Apple ee iPhone-ka.
Waxaa daabacay ragga ka Ganacsade Insider sababtoo ah warbixin ka timid la-talinta Citi. IPhone-yada soo socda ee la sii deyn doono bisha Sebtember, 2019 iPhones, waxay yeelan doonaan taageero loo yaqaan 'stylus', oo ah stylus oo sida muuqata noqon doona qalinka Apple.
Citi ayaa lagu daray "IPhone stylus / stylus haysta" liiska Astaamaha Aad Filayso inaad Ku Aragto iPhones-ka 2019 ka yimid Apple. Qalinka Apple waxaa la soo saaray sanadkii 2015 iyada oo ay weheliso jiilka kowaad ee iPad Pro, shirkadduna wakhtigan waxay iibisaa laba nooc oo ka mid ah. Hal nooc ayaa la jaan qaadaya noocyadeeda cusub ee iPad Pro, daabacaaddi horena waxay sidoo kale la shaqeysaa kiniinno kale sida iPad Air cusub iyo iPad mini iyo jiilka XNUMXaad ee iPad.
Y Uma maleynayo inay sii deyn doonaan nooc cusub oo qalinka Apple ah sanadkaan (mid ka yar wuxuu noqon karaa inkastoon ka shakiyo), IPhones waxay isticmaali doonaan labada nooc ee qalinka Apple la heli karo suuqa. Wax aad u faa iido badan hadii aan horey u haysanay qalin qalin leh Apple Pro, suurta galnimada inaan ku isticmaalno qalinka Apple-kiisa iPhone-ka waqtiyada qaarkood. Waan arki doonaa waxa dhaca bisha Sebtember ee soo socota.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » IPhone-yada soo socda ayaa taageero u yeelan kara qalinka Apple
Waxaan u maleynayaa in taageerada qalinka ee shaashad yar ay tahay waxa ay ku qeylinayaan dadka isticmaala Apple.
Hadda oo batterigu soconayo laba maalmood waxaan u dhaafi doonnaa iPhone 15.
Waxyaabaha ayaa ah in la helo nuugayayaal xitaa haddii ay yihiin wax aan micno lahayn si ay u sii wadaan lacag aad u qaali ah oo ah alaab gaar ah.
Jawaab Javi Carcasola